လျှပ်စစ်သံကြိုးလွှင့်ထူခြင်း၏စျေးနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အချက်များကား အဘယ်နည်း
ကုန်သည် သို့မဟုတ် စားသုံးသူ၏ ရှုထောင့်မှဖြစ်စေ စျေးနှုန်းအပေါ် တူညီသော အာရုံစိုက်မှုရှိသည်။စျေးနှုန်းမြင့်လာသောအခါတွင် စားသုံးသူများက ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် စျေးနှုန်းနိမ့်သည်ဟု ခံစားရပြီး ကုန်သည်က ယူရန်အမြတ်မရှိဟု ခံစားရလေသည်။ဒါဆို စျေးနှုန်းအပေါ် ဘယ်လိုအချက်တွေက သက်ရောက်မှုရှိမှာလဲ...
အဆိုပါအချက်များသည် လျှပ်စစ်သံကြိုး လွှင့်တင်သူများ၏ ဈေးနှုန်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်းတွင်၊ အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ကော်ပိုရိတ်စက်ရုံအချို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားများ အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။လျှပ်စစ်တွန်းအားသည် ပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လစ်သော၊ အမျိုးအစားများစွာပါရှိပြီး မတူညီသောနေရာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်စေပါသည်။...
ဝက်အူပေါက်ဆိုတာ ဘာလဲ။အသုံးပြုပုံ လမ်းညွှန်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ဝက်အူပေါက်သည် ပစ္စတင်၊ ပစ္စတင်ဆလင်ဒါ၊ ထိပ်ဖုံးနှင့် အပြင်ဘက်အဖုံးကဲ့သို့သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ဟိုက်ဒရောလစ် နိယာမကို အသုံးပြု၍ လက်ဖြင့်ထိုးထားသော ဆီပန့်သည် လေးလံသောအရာများကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ပစ္စတင်အောက်ခြေသို့ ဆီများကို ဖိကာ အလုပ်သည် တည်ငြိမ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။လူရှိတယ်...
လျှပ်စစ်သံကြိုးလွှင့်ထူကာဗာ၏ သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း မှားနေပါသည်။
လျှပ်စစ် သံကြိုး လျှပ်စီးအဖုံးသည် လက်ဆွဲကြိုး လျှပ်စီးအဖုံးနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကာကွယ်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်သာမကဘဲ ထုတ်ကုန်အမည်၊ ဒေတာနံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်သူစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြားနိုင်စေမည့် အမှတ်အသားအချို့ပါရှိသည်။မကြာခဏ အသုံးမပြုပါ။ဆီအနည်းငယ်သတိထားပါ...
Hand Chain Hoist ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
1. ကွင်းဆက်ပျက်စီးသည် ကွင်းဆက်ပျက်စီးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ကွဲအက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ပျက်စီးနေသောကြိုးကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော မတော်တဆမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချိန်မီ အစားထိုးရမည်။2. ချိတ်သည် ပျက်စီးသွားခြင်း Hook ပျက်စီးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ထင်ရှားသည်- အရိုးကျိုးခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် de...
ASAKA HHBB လျှပ်စစ်သံကြိုးလွှင့်ထူသည့်ဘေးကင်းရေးကိရိယာအကြောင်းမိတ်ဆက်
HHBB လျှပ်စစ်ကွင်းဆက်လျှပ်စစ် Hoist သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ စတင်ထုတ်လုပ်သည့် အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော လျှပ်စစ်ကွင်းဆက်လျှပ်စီးဖြစ်သည်။အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမြှင့်စက်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာအား အသေးစိတ် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်- ၁။ မော်တာဘရိတ် “Electromagnetic brake” သည် ထူးခြားသော ဘရိတ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ သင်တောင်...
Genius သည် Shimano Di2 နှင့် SRAM ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စက်ဘီးလုပ်ငန်းက မင်းရဲ့ သီးခြားလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါ မင်းဘာလုပ်မလဲ။အကယ်၍ သင်သည် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နယူးနစ်ကျွမ်းကျင်သူ Paul Townsend ဖြစ်ပါက သင်သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပြီး ပြိုင်ဘက်အမှတ်တံဆိပ်များမှ အစိတ်အပိုင်းများကို ခိုးယူမည်ဖြစ်သည်။Paul က Road Technology Dead-en ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
power recovery winch စျေးကွက်သည် 2028 တွင် ခိုင်မာသောတိုးတက်မှုကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
စွန့်စားမှုအားကစားနှင့် အားကစားများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ ပါဝါပြန်လည်ရယူသည့် winch သည် စွန့်စားစီးနင်းသူအတွက် ဘေးကင်းစေရန် ကျယ်ပြန့်သောနေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ပါဝါပြန်လည်ရယူသည့် winch သည် လေးလံသော အရာများကို ပြင်ဆင်ရန်၊ ရွှေ့ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ပါဝါရင်းမြစ်ကို အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာဖြစ်သည်။Power Recovery Winch က လွယ်ပါတယ်...
ကိုလံဘီယာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပ်ချုပ်ကုမ္ပဏီသည် အလုပ်အကိုင် ၅၀ အထိ ဖန်တီးပေးသည်။
ကိုလံဘီယာ၊ အင်ဒီယားနား (WANE)- သင်္ဘောသားများအတွက် အထည်များ၊ ကိရိယာများ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အပ်ချုပ်ပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးသွင်းသူသည် အင်ဒီယားနားအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။Sailrite Enterprises Inc. သည် ၎င်း၏ CR 100 South ရုံးချုပ်ကို ၃၂,၅၀၀ စတုရန်းပေအထိ တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ဒေါ်လာ ၃.၂၅ သန်း...
အထူးမြင်ကွင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လွှင့်ထူ
21-03-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
မတ်လ 15 ရက်၊ 2021၊ Zhejiang hangzhou မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည်လူထုသတိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်၊ မီးရှူးမီးပန်းများတင်ထားသောထရပ်ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်ခဲ့ပြီးယာဉ်မောင်းသည်လေယာဉ်မှူးအခန်းပုံသဏ္ဍာန်တွင်ပိတ်မိနေပြီးမရုန်းနိုင်ပါ။မီးသတ်သမားများသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ အမြန်သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မီးရှူးမီးပန်းများ ပြန့်ကျဲနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်...
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပိုမိုတွန်းအားဖြစ်စေရန်
2020 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်တန်ဖိုးသည် စံချိန်တင် မြင့်မားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Jiangsu ပြည်နယ်ရှိ Lianyungang ဆိပ်ကမ်းရှိ ကွန်တိန်နာဂိတ်တွင် ကွန်တိန်နာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ကွန်တိန်နာ သင်္ဘောတစ်စီးမှ အကြီးစား စက်ယန္တရားကြီးများ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ GDP သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယွမ် ၁၀၀ ထရီလျံ ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။